Nhau - Wenchuan County Yanmenguan sevhisi yenharaunda DC kuchaja chiteshi kuiswa kushanda
AC Yekuchaja Chiteshi
DC Yekuchaja Chiteshi
Basa uye Basa
Wenchuan County Yanmenguan sevhisi nharaunda DC kuchaja chiteshi kuiswa kushanda
Musi waSeptember 1, 2021, chiteshi chekuchaja muYanmenguan Comprehensive Service Area yeWenchuan County chakaiswa mukushanda, chinova chiteshi chekuchaja chekutanga chakavakwa nekuiswa mukushanda neAba Power Supply Kambani yeHurumende Grid yeChina. Chiteshi chekuchaja chine 5 DC yekuchaja poindi, imwe neimwe yakashongedzwa nepfuti mbiri dzekuchaja ine yakatemwa simba rekuburitsa re120kW (60kW kuburitsa kwepfuti yega yega), iyo inogona kupa yekuchaja sevhisi kune gumi emagetsi mota panguva imwe chete. Iwo mashanu anokurumidza kuchaja nzvimbo ese anogadzirwa naSichuan Wei Yu Boka, Weeyu, muchimiro cheODM yeAba Power Supply Kambani yeHurumende Grid Corporation yeChina.
"Inogona kubhadharisa kWh maviri paminiti, uye zvinongotora maminetsi makumi maviri nemashanu kuti mota iite 50 kWh, izvo zvichiri kushanda chaizvo." VaDeng Chuanjiang, mutevedzeri mukuru maneja weHurumende Grid Aba Power Supply Kambani, vakazivisa kuti kupedzisa nekushanda kwenzvimbo dzekuchaja muYanmenguan Comprehensive sevhisi nzvimbo kwakapedza nhoroondo yekusa sango renzvimbo dzekuchaja nekukurumidza muAba Prefecture, uye zvakagadzirisa dambudziko re kukurumidza kuchaja varidzi vemasimba matsva.
Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti Wenchuan County iri munzvimbo yakakwira-nharaunda ine avhareji yekukwira kwemamita 3160. Kuvakwa kwenzvimbo dzekuchaja dzemirwi dcc pakukwirira kwakadaro pasina kukanganisa kwakanyanya pakumhanya kwekuchaja kunoenderera mberi kunoratidza kuti NIO magetsi muridzi weiyo indasitiri yezvigadzirwa inotungamira tekinoroji uye kutonga kwemhando yepamusoro.
Kubva Chivabvu gore rino, State Grid yeChina yakateedzana yakavaka huwandu hwekuchaja mirwi muAba Prefecture uye ikasvika pakadzika kubatana neSichuan Weiyu Electric Co, LTD. Parizvino, idzo pfumbamwe pfumbamwe kupinda wenchuan, songpan kuchaja zviteshi zvine kuvaka, zvine mukana wekuwanda masumbu masheja nekukurumidza uye jiuzhaigou Hilton hotera 'photovoltaic imwe-chidimbu kuchaja zviteshi zviri kuvakwa, yakavakwa munaGunyana inotarisirwa kuiswa mukushanda, maoxian County kuchaja murwi ndeyekuti ikurumidze kuvaka, mushure mekupedza kuchaja kubva chengdu kusvika jiuzhaigou ichaitwa zvizere.
VaDeng Chuanjiang vakati mushure mekupedzwa kweguta, dunhu nenzvimbo dzakakosha, nzvimbo dzakanaka dzinochaja kuvaka webhusaiti, kambani Grid Aba magetsi Supply kambani ichaenderana nemamiriro chaiwo ekusimbisa nzvimbo yekuchaja, uye shingairira kuronga kuchaja chiteshi mukati memakiromita makumi manomwe kusvika makumi masere, nyatso kugadzirisa dambudziko remagetsi emagetsi emagetsi.
Mukuita kwekuchaja, muridzi anoda kuongorora kodhi kuti atorere iyo APP uye ashande zvinoenderana nemazano ari paAPP uye nekuchaja murwi kuti apedze basa rekuchaja. Muzhinji, zvinotora ingangoita makumi matanhatu kusvika makumi manomwe emadhora kuti izere ne50 kilowatt-maawa emagetsi. Inogona kumhanya makiromita mazana mana kusvika mazana mashanu, uye ingori 0,1 kusvika 0,2 yuan pamakiromita. Zvichienzaniswa nemutengo unodarika 0,6 yuan pamakiromita emota dzemafuta, mota dzesimba nyowani dzinogona kuchengetedza nezve 0.5 yuan pakiromita.
Post nguva: Sep-07-2021
Tianyu Science Technology Park, No.1 Tumenjiang Road, Deyang Guta, Sichuan, China
Ev Imba, Kuchaja Zviteshi Ev, Ev Charge Chiteshi, Ev Charge Zviteshi, Magetsi Motaja, Kubhadharisa Chiteshi Ev,